Uganda inotambira Nyowani Nyowani Rwizi rweNile
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Uganda inotambira Nyowani Nyowani Rwizi rweNile
tsika nemagariro • wedzero • Hurumende Nhau • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Uganda Nyowani Makore kupemberera
Nile Bridge muUganda rinovhara guta reJinja
Mhemberero yegore idzva ra2021 muUganda yakaunzwa neChipupuriro chakajeka cheNire Bridge muguta rechipiri reUganda Jinja. Kusiyana nemhemberero dzekare, gore rino raive chiitiko chakaderera chine mafiraya aingobvumidzwa pazambuko nekuda kwedenda recovid.
Chikamu chakagadzwa nevaraidzo yakapihwa nebheyoni yevaimbi nema deejays kuti vararame nhepfenyuro pazviteshi zvikuru zveterevhizheni unova ndiwo chete mukana wekuona mafiraya. Mapurisa akanyatso tarisa chiitiko ichi achivharira vatyairi kupinda mubridge vachigadzirira mafayaire. Mapurisa aichengetwa akabatikana husiku hwese vachiedza kumanikidza veruzhinji kubva mukuzvidza nguva dzekumira dzekuma 9 dzemanheru kunyange hazvo mabhawa mazhinji akasara akavhurwa nemafaro emafaro kusvika nguva dzehusiku vamwe vaive vabatidza moto vachiridza katsi nembeva vachidzingirira nemapurisa.
Makore epakati pehusiku mafirati akadzikiswa nemvura zhinji, neimwe nzira chikomborero chetariro yekukohwa kwakanaka kana rombo rakanaka mutsika dzechiAfrica, izvo zvinongodiwa nenyika muna2021. Yakavhurwa muna Gumiguru 2018 neMutungamiriri weUganda, HE Yoweri Kaguta Museveni tambo -akagara 525metre Chitubu cheiyo Nile Bridge ndiyo huru arteri kumuganhu wakabatikana weKenya unobatanidza kutengeserana / kupinza kutengeserana mudunhu neEast Africa chiteshi cheMombasa. Yakavakwa nerubatsiro kubva kuhurumende yeJapan, ichitsiva kukwegura kweNalubale Bridge iyo yakapihwa basa pamwe chete nemvura yemvura yeOwen Falls nedziva reEngland Elizabeth II mu1954. Inozivikanwa seguta guru reEast Africa rekukwikwidza, kukwikwidza bhiza, kukwira mabhiza. , uye bungee kusvetuka,
Jinja ndipo panotangira rwizi Nile rwendo rwayo rwemaira 4000 kuenda kuMediterranean.Rwizi rwakareba kupfuura dzimwe nyika rwunoyambuka Uganda, South Sudan, Sudan neEjipitori nemamwe madhorobha mazhinji uye masosi kubva kurwizi Kagera muRwanda kuenda ku Blue Nile munzvimbo dzakakwirira dzeAbyssinia muEthiopia.
Bhiriji idzva rave chiratidzo chenyika ino kune mafiraya egore idzva. 'Mhinduro yeUganda kuSydney Bridge'… yakagumburisa mumwe munhu